Guddoonka Labada Aqal ee Baarlamaanka oo dib-u-dhigay furitaanka kalfadhiga 7-aad sababo la xiriira cudurka COVID-19 – Kalfadhi
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan iyo Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo maanta soo saaray qoraal wadajir ah ayaa ku dhawaaqay in dib loo dhigay furitaankii kalfadhiga 7-aad ee Baarlamaanka labada Gole oo lagu waday inuu furmo 20-ka bishan April.
Labada guddoon, ayaa sheegay in ay go’aankan ay qaateen iyada oo la ilaalinayo badqabka Xildhibaannadda, Senatarrada iyo Shaqaallaha Baarlamaanka. Guddoomiyeyaasha ayaa sheegay in marka xaalad ku habboon la arko dib loo furi doono Kalfadhiga, lana soo saari doono qoraallo.
Guddoomiyaasha labada Aqal ayaa ku sugan dalka Turkiga oo ay ku xayirmeen, sababo la xiriira joojinta duullimaadyada adduunka.
Dalka Soomaaliya ayaa laga helay inkabadan 160 kiis oo cudurka COVID-19 ah, iyadoona ay xanuunka u dhinteen 7 qof.